Chii chakaitika pakati paLandon McBroom naShyla Walker? Aimbove anowana kuchengetwa kwemwanasikana Mweya, pakati pekusanzwisisika kurambana - Pop-Tsika
Chii chakaitika pakati paLandon McBroom naShyla Walker? Aimbove anowana kuchengetwa kwemwanasikana Mweya, pakati pekusanzwisisika kurambana
Landon McBroom akazobvumidzwa kuona mwanasikana wake mushure mekunge Shyla Walker anonzi arasa mutemo wekumurambidza. Landon nemwanasikana waShyla, Mweya anonzi akashanyira mhuri yevaimbova mushure memwedzi mitatu.
Landon McBroom akatora ku Instagram kugovana akateedzana emifananidzo yemwanasikana wake achipedza nguva kumahombekombe nemhuri yake. Anotungamira akatumidza nzvimbo yacho kukunda uye akanyora kuti:
kuziva sei kana asiri mukati mako
Yakareba mwedzi mitatu yehupenyu hwedu. Nhasi kwaive kukunda.
Chinyorwa chakagovaniswa naLando (@landonmcbroom_)
Zvichakadaro, Shyla Walker akaenda ku Instagram kuti agovane zvikonzero zvechisarudzo chake chekurasa mhosva dzaipomerwa McBroom:
Ndakarohwa, ndakashungurudzwa, ndakaedza katatu kubata mwana wangu. Kana iwe uchida vamwe hauzviise iwe pachinzvimbo chekurasikirwa navo. Ndichagara ndichiita zvakanakira mwana wangu nguva yega yega.
Walker akataura kuti aida kuti mwanasikana wake ave nehukama hwakanaka nababa vake zvisinei nemamiriro ezvinhu:
Ndakumbira kushanyirwa, ndinoda mwanasikana wangu ave nehukama nababa vake vaachazoda kuda zvisinei nemamiriro ezvinhu. Vana vanokura uye vanozopedzisira vaona chokwadi vega pasina ini ndataura kana izwi rimwe chete.
Shyla Walker IG Nhau 1/2
Shyla Walker IG Nhau 2/2
zviratidzo iwe wagadzirira hukama
Zvisinei, iyo YouTuber yakasheedza Landon McBroom kuti irege kuremekedza zvakavanzika zvemwanasikana wavo. Akataura kuti mhuri yeMcBroom yakatumira mifananidzo yeMweya kuti iunganidze vanhu vakawanda:
Zvese zvandakabvunza ndeyekuti kuvanzika kwake kuremekedzwe panguva ino uye kwete kumubata iye kuti awedzere uye / kana mari kuwana.
Pakutanga kwegore rino, Shyla Walker akapomera Landon McBroom mhosva yemhirizhonga mudzimba nekushungurudzwa. Akazopa chirevo chekudzivirira uyu wechipiri mushure mekunge amboedza kupamba mwanasikana wavo.
Kutarisa muhukama hwaLandon McBroom naShyla Walker
Landon McBroom, munin'ina wa ACE Mhuri tateguru Austin McBroom, anonzi akasangana naShyla Walker kutenderedza 2016. Ivo vaviri vakatanga kufambidzana nguva pfupi yapfuura uye vakatanga chiteshi cheYouTube pamwechete mu2017.
Iyi iL & S yakawana mukurumbira wakakura paYouTube uye yakaunganidza vanopfuura mamirioni matatu vanyoreri mukati menguva pfupi yenguva. Mune imwe yemavhidhiyo eQ & A, Landon McBroom akataura nezvehukama hwake naShyla Walker:
Kuziva kwandakaita Shyla ndiye angave ari nekuti zvimwe zvese zvaitaridzika kunge zvakasikwa kubva pakusvetuka. Handina kumbobvira ndaisa kumberi kana chero chinhu chakadai.
Kunyangwe hukama hwavo hwainzi hwakarova chigamba muna 2018, vaviri vacho vakayananiswa mushure menguva pfupi yekuparadzana. Landon naShyla vakatambira mwanasikana wavo, Souline Amour McBroom mu2019.
Vaviri ava vakamutsa runyerekupe rwemuchato kutenderera 2020 asi mwedzi mishoma gare gare Landon akagovana kuti Shyla aive achida kutora zororo kubva kuiyi Ino L & S chiteshi. Zvichakadaro, fungidziro pamusoro pekugona kurambana pakati paLandon naShyla yakaita kutenderera pasocial media.
Zvinhu zvakazoita manyama amire nerongo apo Shyla Walker akamhan'arira Landon McBroom nekurova uye kurova mudzimba. Shyla mukoma waAlfa, uye shamwari Teresa Unique, vakagovanawo humbowo hwemifananidzo yekushungurudzwa.
Musi wa15 Chikumi, Shyla Walker akaendesa zviri pamutemo gwaro redziviriro kunaLandon McBroom vachipomerwa mhosva yekubira mweya. Sekureva kweTMZ, McBroom anonzi akapa mwana uyu kumushandi ndokuvakumbira kuti vatize.
Sekureva kwemagwaro edare akaburitswa muna Chikumi 26, Landon McBroom naShyla Walker vanonzi vakatanga kukakavadzana nenyaya dzemari. Izvi zvakatungamira mukurohwa kwekudzokororwa kwepanyama pane kwekupedzisira.
gehena muchitokisi meme
Zvinyorwa zvematare zvakaratidza kushungurudzwa kwakaitwa Shyla naLandon (uyo anonzi haana kuenda kunonzwa kuti azvidzivirire) pamwe nekutyisidzirwa kwekushungurudzwa neaimbove mushandi Joseph pic.twitter.com/CPvqX1jrUj
- 𝐠𝐢𝐚. (@muridzo) Chikumi 23, 2021
Iwo magwaro akaburitsawo kuti McBroom akaedza kupamba mwanasikana wavo kechipiri. Zvakadaro, Shyla anonzi akabvisa mutemo unodzivisa kuti mweya ubvumirane nababa vake.
Zvinosara kuti zvionekwe kana vaviri ava vekare vachizobudirira kubata mubereki wemubereki mwanasikana wavo, vachiisa parutivi kusawirirana kwavo.
Uyezve Verenga: Magwaro edare anoratidza kurohwa kwaLandon McBroom kurwisa Shyla Walker pamhepo online
kubatsira munhu sei pakurambana
zvinhu zvekuita kana ur wakaboora pamba
sei vakadzi vachichema kana vakatsamwa
alexa mufaro uye braun strowman
sei kusaitira godo mukomana wako
kutaura sei kana mukadzi achida iwe